Ruushka oo robot gaashaaman la yimid dalka Ukraine & howsha uu qabanayo + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Ruushka oo robot gaashaaman la yimid dalka Ukraine & howsha uu qabanayo...
Ruushka oo robot gaashaaman la yimid dalka Ukraine & howsha uu qabanayo + Sawirro
(Hadalsame) 22 Maajo 2022 – Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa soo bandhigtay muuqaallo muujinaya ciidamada dhulka oo isticmaalaya Robot-ka Uran-6 oo aan cidina wadin si ay miinooyinka uga saaraan waddooyinka gobolka Luhansk. Wasaaradda Ruushka ayaa sheegtay in ciidamada qalabka sida ee Ukraine ay dhigeen “miiyooyin badan” gobolka Luhansk.
Muxuu yahay Uran-6
Waa Robot Ruush ah oo howl badan qaban kara kuwaasoo ay ku jiraan miino-saarka dhulka. Robot-kan waxa lagu daabuli karaa cirka, badda, iyo dhulka. Aad ayuu xajmi ahaan u fudue yahay – culeyskiisu waa 6 tan oo keliya, dhererkiisu waa ilaa 4.5 mitir, ballac ahaanna waa 2 mitir, jooggana waa 1.5 mitir.
Robot-ka gaashaaman ee Ruushku miinada ku baaro
Waxaa ku rakiban afar kaamaradood oo xagga sare ah, taas oo u oggolaanaysa howlwadeenka ku shaqeeynaya in uu la socdo oo uu helo sawir xagashiisu buuxdo oo 360-digrii ah. Waxa gacanta ku haya hal howlwadeen, sawirka ay soo celinaysaana waa mid toos ah.
Uran-6 waxaa loogu yeeraa mid doorar badan ciyaara sababtoo ah waxay si fudud loo dhexgalin karaa qalabka gacanta ka gaysanaya in dhulka la miino saaro, sida yaambada cagaf cagafta oo 1.8 m ballac ahaan dhan, miino saarka iskiis u shaqeeya ee “Boykova”, wiishashka iyo aaladda kale ee miinooyinka baarta ee “Katkov” IWM.
Meesha laga xukumo
Robot-ka waxaa laga xukumi karaa meel fogaan ahaan dhan ilaa 1 km. Howlwadeenka mishiinka ku shaqaynaya waxa uu meel fog ka dooranayaa nooca wax ku oolka ah ee loo qarxinayo miinada taasoo hadba ku salaysan nooca shaygan robot-ka ihi uu go’aamiyo.
Previous articleSu’aal culus oo ka dhalatay hadal uu maanta sheegay MW hore ee DF Somalia
Next articleGabadhii reerka dumisey oo ka hadashay sabab la yaab leh oo ay tillaabadaa u qaadday & hooyadii guriga oo ka jawaabtey